I-Rural Cottage kumhlaba weBanga lesi-II* kwiFama
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMark
Le Autumn & Winter, uMark & Paul angathanda ukukwamkela kwigumbi lethu lokulala eli-2 elipholileyo elisemaphandleni elingaphantsi kweemayile ukusuka kunxweme lwaseKent kumhlaba we-14th Century Frognal Farmhouse kwiParish yaseTeynham. I-cottage ibonelela ngendawo yokuhlala etofotofo ifanelekileyo kwikhefu elifutshane kwaye ingaphezulu nje kweyure ukusuka e-SE London ngemoto, okanye uthathe uloliwe ngqo ukuya kwilali esuka eLondon Victoria, kwakhona kwiyure nje enye. IFaversham kunye neSittingbourne ziyi-10 imizuzu kude.
Indlu yi-45m ephindwe kabini kwaye isetyenziselwa wena kuphela. Abaninimzi uMarko noPaul bahlala kwenye indlu emabaleni. Indlu enkulu yasefama ngoku iyalungiswa kwaye iza kuvulwa njengendlu yeendwendwe kamsinya nje yakuba igqityiwe. (Kuqikelelwa iNtwasahlobo ka-2023) Kwindlwana yokulala omabini amagumbi okulala aneebhedi zeKing size, i-13.5 Tog duvets, iiwodrophu, iiyunithi zedrowa, kunye neetafile ezisecaleni kwebhedi, kunye neeTV eziqhagamshelwe kwi-intanethi. Igumbi lokuhlala linesofa, iTV eqhagamshelwe kwi-intanethi, kunye netafile kunye nezitulo ezi-4. Kukho igumbi lokuhlambela langoku elineshawa, indlu yangasese & nesinki. Ikhitshi elincinane line hob, microwave, mini dishwasher, isinki & mini fridge, iketile & netoaster, kwakunye nezitya. Iindwendwe ziye zabelana ngokusetyenziswa (kwabelwana nabanini) kwigadi enkulu. Siyazamkela izinja, kodwa nceda uqale usithumelele umyalezo ukuba uza nezilo-qabane ukuze uzijonge ukuba zikulungele wena kunye ne(nezi)zilwanyana zakho. Sikwanomgaqo-nkqubo wembuyekezo obhetyebhetye kakhulu ukubonisa imeko yezempilo engalindelekanga esijongene nayo sonke ngoku.
ITeynham ilali encinci phakathi kweFaversham kunye neSittingborne. Singaphandle nje kwelali, ngoko akukho bamelwane basondeleyo. Unokuhlala egadini uze uve iintaka zintyiloza imini yonke. Onomatse banokuvela bazame ukufumana ukutya kwentaka okanye bangcwabe indongomane abalithathile kumthi wethu weWalnut. Kukho iindawo ezintle zokuhamba kule ndawo, kunye nabakhweli beebhayisikile abaninzi. Siyimayile kuphela ukusuka kunxweme lwechweba kunye neSaxon Shore Way. ICanterbury, iFaversham Whitstable kunye neRochester zonke zikufutshane kwaye zifikeleleka ngokulula ngololiwe.
Abanini bahlala kwenye i-cottage egadini kwaye bayafumaneka kwisiza ukuba bafuna iindwendwe zethu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Teynham